China Hydrolyzed Gelatin ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
I-gelatin ene-hydrolyzed ebizwa nangokuthi i-hydrolyzed collagen iyiprotheni eguquguqukayo futhi iyinto ebalulekile ekwakhiweni okunempilo kokudla.Izakhiwo zabo zokudla okunempilo nezomzimba zikhuthaza amathambo namalunga aphilile futhi zisize abantu babe nesikhumba esihle.
Okusetshenziswayo kokwenza ama-collagen peptides - futhi i-gelatin ene-hydrolyzed - yi-collagen.Kodwa i-collagen peptide molecule incane kakhulu, inesisindo esingaphansi kuka-10,000 g / mol. Lawa ma-peptide aqukethe ama-amino acid aphakathi kwamabili kuya kwayi-100. Ayaziwa ngokuncibilika kwawo okuhle kakhulu emanzini abandayo futhi awaqandi ngisho emazingeni aphezulu.
I-gelatin ene-hydrolyzed kungumphumela we-gelatin ku-hydrolysis. Isenzo se-hydrolyzing into sisho ukuyiphula ngokusebenzisa amanzi. Yileyo ndlela okwakhiwa ngayo i-gelatin ene-hydrolyzed. Ngemuva kokungena kubhavu we-enzyme, amaketanga emvelo amaprotheni e-gelatin agqashukile. Okusele yinto elula ukuthi imizimba yethu imunce futhi igaye.
I-gelatin ene-hydrolyzed incibilika khona manjalo oketshezini olushisayo noma olubandayo. Ngokungafani ne-gelatin ejwayelekile, i-gelatin ene-hydrolyzed ngeke yakhe into ye-gel. Eqinisweni, ayishintshi ukuthungwa nhlobo. Njengoba kumane nje kuncibilike,i-gelatin ene-hydrolyzed kulula ukuxubana neziphuzo nezindlela zokupheka eziningi. Uma kukhulunywa ngokukufaka ekudleni kwakho, kuyindlela elula yokusebenzisa.
Ama-Peptides e-Premium Hydrolyzed Collagen: Usekela ukuhlangana, isikhumba, izinwele, imisipha namathambo. Kufaka ama-Enzyme wokugaya ukudla ukuze amuncwe kangcono ne-Organic Spirulina yamaprotheni engeziwe ama-amino acid + ithusi ukusekela ukwakheka kwe-collagen.
Izinzuzo Zokulwa Nokuguga: I-Collagen isiza ukulungiswa kwamaseli esikhumba ngesikhumba esiqinile, esiqinile futhi isekela ukukhiqizwa kwe-keratin ukuze kukhule izinwele ezinamandla, nezibushelelezi. Kwangathi kungathuthukisa ukubukeka kwe-cellulite ngokubuyisela ukwakheka okujwayelekile kwezicubu zomzimba.
Umsebenzi Ohlangene Ophilile: I-Collagen isekela izicubu ezinempilo eziphakathi koqwanga, imisipha, imisipha, imisipha namathambo ukuthuthukisa ukuhamba nokukhulisa ukuguquguquka.
Ilebuli Ehlanzekile: Yenziwe ngezithako zemvelo, ezingezona eze-GMO. Kumahhala kwezivimbelakuvunda, imibala yokwenziwa, ukunambitheka okufakelwayo, kanye nama-allergen ajwayelekile kakhulu. Yenziwe e-USA esikhungweni esihambisana ne-GMP.
Ukwaneliseka kwamakhasimende: Uma unganelisekile nganoma yisiphi isizathu, mane uxhumane nethimba lethu lokunakekelwa kwamakhasimende futhi sizokunakekela.
Langaphambilini I-Collagen ene-Hydrolyzed
Olandelayo: I-Bovine Collagen Peptides